निषेधाज्ञा तोड्दै बर्दिबासमा निरन्तर प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी – bampijhyala.com
Home > समाचार > घटना र अपराध नियन्त्रण > निषेधाज्ञा तोड्दै बर्दिबासमा निरन्तर प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी
१० मंसिर २०७७, बुधबार १६:१४ bampijhyala
१० मंसिर, बाँपीझ्याला, बर्दिबास । ६ वर्षीय बालिका गुलाब साह खातुनको हत्या घटनाले बार्दिबासमा तनाव बढेको छ। दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर संजय न्यौपानेको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप चर्किएको छ। मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र दोषीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
बर्दिबासका सर्वपक्षीय बैठकले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेको छ। बर्दिबास सेवा समितिले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आन्दोलनमा गोली चलाउन निर्देशन दिनेलाई तुरुन्त निलम्बन गरेर बर्खास्त गर्नुपर्ने, बालिकाको हत्यारालाई कडा कारवाही हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो। यस्तै माग पूरा गर्न सरसकारसँग वार्ता गर्ने वार्ता टोलीसमेत गठन भएको छ। कांग्रेसका नेता चिरञ्जिवी हमालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको हो।
उपचारको क्रममा काठमाडौंमा मृत्यु भएका न्यौपानेको शव आजै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्ने परिवारजनले जनाएको छ। आइतबारबाट हराएकी महोत्तरीको बर्दिबास- १४ स्थित शुभम् बस्तीकी ६ वर्षीय गुलाब साह खातुनको शव सोमबार मध्यराति भेटिएको थियो। बालिका हत्याको आरोपमा गौशाला–५ का अरुण साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
भीड तितरवितर पार्न प्रहरीले चलाएको गोली ‘उछिटिएर’ लागेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापाले प्रहरीले मृतक बालिकाको लाशलाई समयमा व्यवस्थान गर्न नसक्दा अर्को मान्छे मर्ने घटना भएको बताइन्।
उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिबासका सदस्य विनोद भण्डारीले राजनीतिक दलको ठूलो कमजोरीले वातावरण बिग्रिएको बताए।
दोषीलाई फाँसी दिन माग
प्रदर्शनकारीले दोषीलाई फाँसी दिन माग गर्दै प्रदर्शनलाई चर्काएका छन्। सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनकारीले बर्दिबासमा आन्दोलन चर्काएका हुन्।
प्रदर्शनकारीले बिहानैदेखि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ठप्प पारेका छन्। प्रदर्शनकारीले राजमार्गमा टायर बालेर बाटो अवरुद्ध गरेका हुन्।
उनीहरूले बालिकाको हत्यारालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, प्रहरी दमन अन्त्य गर्नुपर्ने, गोली चलाउने प्रहरी तथा गोली चलाउन आदेश दिनेलाई तुरुन्त निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
बर्दिबास क्षेत्रमा निषेधाज्ञा
घटनाको विषयमा तनाव बढ्दै गएपछि बर्दिबासमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले बुधबार बिहान ९ बजेदेखि बर्दिबासमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृणबहादुर पूर्वमा रातु खोला, पश्चिममा माइस्थान, उत्तर पाटुचोक र दक्षिणमा क्वाट्रचोकसम्म निषेधाज्ञा जारी भएको छ।
सीडीओ कटुवालका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजेदेखि बिहीबार बिहान ६ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो।
यो पनी पढ्नुस
६ वर्षीया बालिका हत्याको विरोधमा स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञाका बीच महोत्तरीको बर्दिबासमा बुधबार प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ ।
प्रदर्शनकारीले बर्दिबासका नगर प्रमुखको पुत्ला दहन गर्ने क्रममा झडप भएको हो । सो क्रममा प्रहरीले दर्जन राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीको भिडलाई तितरबितर पारेको छ ।
यसैबीच बर्दिबास घटनाको विरोधमा सदरमुकाम जलेश्वरमा समेत प्रदर्शन भएको छ ।
स्थानीय युवाहरुले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
६ वर्षीया बालिका गुलाबसा खातुनको हत्याको विरोधमा मंगलबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १० मंसिर २०७७, बुधबार १६:१४
सम्झनामा जेठ ३ १० मंसिर २०७७, बुधबार १६:१४
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १० मंसिर २०७७, बुधबार १६:१४
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १० मंसिर २०७७, बुधबार १६:१४
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १० मंसिर २०७७, बुधबार १६:१४